‘प्रेम जोडीको २५ दिने सम्बन्धको फरक कथा हो लभ एट २५’ - विवेचना
November 11, 2017 563 Views
प्रेम अद्भुत अनुभव हो । मानिस सधैँ प्रेमिल जीवन बाँच्न चाहन्छ । यो संसारमा प्रेमभन्दा बढी सायदै अरु कुराको चर्चा होला । त्यसैले त हरेक क्षेत्रमा प्रेमले पहिलो स्थान पाउँछ । साहित्य लेखनमा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका अनल गौतमले यही प्रेमलाई समेटेर ‘लभ एट पच्चिस’ उपन्यास बजारमा ल्याएका छन् । २०३८ साल असारमा हेटौँडामा जन्मिएर काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएका उनी पेशाले बीमा क्षेत्रमा व्यस्त छन् । युवक-युवतीको २५ दिने अनौठो प्रेमलाई नौलो प्रस्तुतिसहित उनले उपन्यासमा समेटेका छन् । जय काली प्रकाशन प्रालिबाट प्रकाशित उपन्यास शनिबारबाट काठमाडौँमा सार्वजनिक हुँदैछ । गौतमका यसअघि ‘शुभ प्रभात’ हाइकु संग्रह, ‘चिनारी’ कविता संग्रह, ‘घाट घाटका कथा’ कथोपन्यास प्रकाशन भइसकेका छन् । यसका साथै सरसी गीति संग्रह पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । समाजसेवामा विशेष रुचि राख्ने सर्जक गौतमले चलाएको ‘मिसन रोल्पा’ अभियानको कथालाई अनलाइनखबरले युट्युबमार्फत् डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गरेको छ । द्वन्द्वको पीडा खेपेको रोल्पाले द्वन्द्व खेपेर पनि केही नपाएको व्यथालाई उनले डकुमेन्ट्रीमार्फत् बोलेका छन् । स्रष्टा अनल गौतमसँग नयाँ कृति र साहित्य सरोकारसँग केन्द्रित रहेर विवेचनाकर्मी एकराज प्रधानले गरेको कुराकानी :
‘लभ एट २५’ कस्तो उपन्यास हो ?
यो एउटा रोमान्टिक प्रेम कथामा आधारित उपन्यास हो । जसमा एक प्रेम जोडीको २५ दिनको सम्बन्ध तथा त्यस दौरान भएका उतारचढावहरुको प्रस्तुतीकरण रहेको छ ।
‘प्रेम’ विषयवस्तुमा धेरै कृतिहरु आइसकेका छन् । तपाईंले पनि यही विषयवस्तु रोज्नुको कारण ?
कुनै लेखकले कुन विषयवस्तुमा कस्तो कृतिहरु बजारमा आएको छ भनेर आफ्नो कृति तयार गर्दैन होला । मानवीय सम्वेदनाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभाव भएको सम्वेदना प्रेम नै हो जस्तो लाग्छ मलाई । र, प्रेमबिनाको संसारको शायदै कल्पना गर्न सकिएला । तर पनि मेरो चौथो कृति आउँदासम्ममा बल्ल प्रेममा आधारित विषयले स्थान पाएको छ ।
यसअघि प्रकाशनमा ल्याउनु भएको हाइकु, कविता र कथोपन्यास लेखन र उपन्यास लेखिरहँदा सबैभन्दा रमाइलो केमा महसुस गर्नुभयो ?
सबै साहित्यिक विधाका आफ्नै विशेषताहरु छन् । सबैका आफ्नै सीमाहरु छन् । तर पनि खुलेर र केही हदसम्म आफ्ना भावनाहरु समेत समावेश गर्न सकिने भएकाले मलाई कथा/उपन्यास विधा नै मन पर्छ । र, विशेषत: प्रेममा आधारित भएको र उपन्यास भएर पनि केही फरक र नौलो प्रयोग समेत गरिएकाले मलाई ‘लभ एट २५’ नै लेख्न बढी रमाइलो लाग्यो ।
नयाँ पुस्तकप्रति तपाईंको अपेक्षा कस्तो छ ?
मैले अघि नै भनेँ, प्रेममा आधारित र उपन्यास भएर पनि युवा वर्गको चाहना वा कल्पनामा मनोदशालाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको हुनाले म यो पुस्तक ‘लभ एट २५’ प्रति निकै आशावादी छु ।
व्यावसायिक हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ । लेखनलाई समय कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
मेरो हकमा लेखन हरक्षण हुँदैन, न त जुनसुकै समयमा । दिनको समय चारो खोज्न जता-तता भौँतारिए पनि साँझ परेपछि आफ्नै गुँडमा फर्कनुपर्छ भनेझैँ मलाई पनि खाली भएको रातको समयमा आफ्नै घरमा बसेर लेख्न मनपर्छ ।
साहित्यमा धेरै आए । कोही चम्किए, कोही बिलाए । यस्तो किन हुन्छ ?
साहित्य मात्रै होइन, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नवप्रवेशी वा स्थापितहरु पनि चम्कन्छन्, बिलाउँछन् । यसको कारण युग अनुसारको, पाठकको चाहनाअनुसारको लेखन नहुनु हो । नियमित र लगनशीलता नहुनु अनि कतै समयले साथ नदिँदा पनि त्यस्तो हुन्छ । तर, साहित्यकार भनेको जीवन्त रहन्छ, मरणोपरान्त । बिलाएको जस्तो देखिन्छ मात्र ।
साहित्य लेखनमा अब्बल बन्न उदीयमान लेखकका लागि तपाईको सुझाव के छ ?
अध्ययन, चिन्तन र गहिरो मनन् । विश्लेषणका साथै समय र पाठकको चाहना बमोजिमको लेखनको निरन्तरताले नै कुनै पनि साहित्यकारलाई अब्बल बनाउने हो । तर, कुनै पनि वर्ग, दल वा संगठनका प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रुपमा कलम चल्नुपर्छ ।
आफ्ना पाठकलाई के भन्नुहुन्छ ?
सानैदेखि साहित्य लेखनमा लागे तापनि २०६४ सालदेखि मेरो साहित्यिक कृति प्रकाशन हुन थालेको हो । मेरो आउँदै गरेको ‘लभ एट २५’मा मैले लेखकीय अनुभवलाई पूर्ण रुपमा उतार्ने कोसिस गरेको छु । नेपाली उपन्यास जगतमा युवा वर्गको प्रेमलाई फरक ढङ्गबाट परिभाषित गर्न खोजेको छु । पाठकहरुले यो कृति पढेर आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
Previous काँकरभिट्टा गोल्डकपको विजेतालाई ८ लाख
Next फाल्गुनन्दका योगदान